Department Pages | Department of Medical Service
Archives: Department Pages
https://drive.google.com/file/d/1LpUPA-3NzBS0yUpfRvUWgd7EmYzrbyZk/view?usp=sharing ... Read More | Share it now!
အင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲ ဌာနဖွဲ့စည်းပုံ အရာထမ်းများ ညွှန်ကြားရေးမှူး ၁ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ၃ လ/ထညွှန်ကြားရေးမှူး ၈ ဦးစီးအရာရှိ ၄ လက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာ ၂၂ အရာထမ်းပေါင်း ၃၈ အမှုထမ်းများ ဌာနခွဲစာရေး ၆ အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ ၂၄ အကြီးတန်းစာရေး ၁၇ အငယ်တန်းစာရေး ၈ လက်နှိပ်စက်/ကွန်ပျူတာ လုပ်ဆောင်ရေးမှူး ၂ ပုံဆွဲ ၄ စက်ပြင် ၆ လုပ်သား (အထွေထွေ) ၃၀ အမှုထမ်းပေါင်း ၉၇ ဌာန၏လုပ်ငန်းတာဝန်များ ၁။ မိမိတို့ဌာန၏ ဒီဇိုင်း၊ ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုနှင့် အရည်အသွေး ထိန်းသိမ်းစစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများကို တာဝန်ယူ... Read More | Share it now!
သူနာပြုဌာနခွဲ ဌာနဖွဲ့စည်းပုံ အရာထမ်းများ ညွှန်ကြားရေးမှူး ၁ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ၂ လ/ထညွှန်ကြားရေးမှူး ၅ ဦးစီးအရာရှိ ၆ အရာထမ်းပေါင်း ၁၄ အမှုထမ်းများ ရုံးအုပ် ၃ ဌာနခွဲစာရေး ၆ အကြီးတန်းစာရေး ၁၂ အငယ်တန်းစာရေး ၁၂ လက်နှိပ်စက်/ကွန်ပျူတာ... Read More | Share it now!
အမျိုးသားဓာတ်ခွဲဌာန ဌာနဖွဲ့စည်းပုံ အရာထမျးမြား ညှှနျကွားရေးမှူး ၁ ဒုတိယညှှနျကွားရေးမှူး ၅ လ/ထညှှနျကွားရေးမှူး ၁၀ အထူးကုဆရာဝနျ ၁၇ အငျဂငြျနီယာ/လထအငျဂငြျနီယာ ၂ လ/ထဆရာဝနျ(အထူးကု) ၂၈ ဦးစီးအရာရှိ ၁၈ လုပျငနျးအရာရှိ ၂ အရာထမျးပေါငျး ၈၃ အမှုထမျးမြား ဌာနခှဲစာရေး ၁၁ ကြှမျးကငြျ ၁၆၄ အကွီးတနျးစာရေး ၂၁ ပစ်စညျးထိနျး ၁ အငယျတနျးစာရေး ၁၇ လကျနှိပျစကျ/ကှနျပြူတာ... Read More | Share it now!
အမျိုးသားသွေးဌာန ဌာနဖွဲ့စည်းပုံ အရာထမ်းများ ညွှန်ကြားရေးမှူး ၁ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ၂ လ/ထညွှန်ကြားရေးမှူး/အထူးကုဆရာဝန် ၈ ဦးစီးအရာရှိ (ဓာတ်ခွဲ) ၃ လက်ထောက်ဆတရာဝန် ၁၀ ဦးစီးအရာရှိ (အုပ်ချုပ်) ၁ ဦးစီးအရာရှိ... Read More | Share it now!